Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture ari kupemberera zvayo 85th Anniversary. KhNTUA itsime-vakaziva dzidzo nesangano 4th accreditation pamwero, izvo chatinokoshesa nzvimbo akafanira pakati mumayunivhesiti pamusoro Kharkiv dzidzo centre uye Ukraine.
izvi zvose zvakatanga muna 1930. The kuchinja zvinhu yepamusorosoro uye chinokosha dzidzo vakatanga munyika nokuda kusachengeteka kukuru kuperevedza zvikuru vanonyatsokwanisa pava-.
On 12 July peDare vanhu Commissars of yechiUkraine Soviet Socialist Republic vakapfuura chisarudzo musi pakagadzwa yepamusoro uye yepamusoro michina dzidzo masangano avo hwakanaka zvaitambidzwa pasi wenharaunda yaitongwa vanhu zvakakodzera kuti commissariats. Chikamu "Bazi Agricultural" envisaged wakateya Institute of Mechanisation uye magetsi of Agriculture muna Kharkiv kubva Mechanisation madhipatimendi okurima ne muna Kharkiv uye Poltava.
Kharkiv Institute of Mechanisation uye magetsi of Agriculture (Khim) akatanga kudzidzisa yokungoitawo mainjiniya kushandisa kugadzira uye kugadzira anofamba uye purazi michina.
Pokugadzwa Institute kwaipindirana mavambo pamwero zvaMambo nyika kwemaindasitiri uye nheyo simba michini kugadzira mune zvokurima. Asi kuchinja dzidzo haana inopiwa pamwe zvakakodzera zvinhu uye michina hwaro uye mari. kusakwana zvose izvi vanobatwawo KhIMEA. Paiva rikwanise kuperevedza mumakirasi, anokwanisa mudonzvo, mabhuku okuchikoro, uye rabhoritari midziyo. Kugara zvinhu vadzidzi vaiva kure nokuva zvakaisvonaka uyewo.
The Education uye Research Institute of Electrical Engineering uye Computer Technologies
The dhipatimendi technotronics uye yokungotaura mapurani.
The Education uye Research Institute of Mechatronics uye Management Systems
The dhipatimendi anofamba uye motokari.
The dhipatimendi okurima michina.
Section kwokurovedza hunobatsira.
The dhipatimendi yepamusoro, Standardization uye advertising.
The Education uye Research Institute of Business uye Management
The dhipatimendi inoshandiswa, mabhizimisi utariri uye sangano.
The department of UESCO “Philosophy of Human Communication”, uzivi uye Ukraine nhoroondo.
The Education uye Research Institute of Technical Service
The dhipatimendi kugadziriswa kwesayenzi nehurongwa.
B. Shabelnyk dhipatimendi chebasa gadziriro uye zvipfuwo michina.
The dhipatimendi nezvinhu dzemuchina.
V.Anilovych dhipatimendi michina simba, Kuvimbika uye michina basa michina.
Section chebasa basa michina
WeDhipatimendi Gadziriro engineering foresitiri dzakaoma michina
The Department yokufambisa michina uye logistics
The Education uye Research Institute of Food uye Processing Technologies
Office The Dean nokuda Foreign Students
Centre of Distance uye rinopindura mibvunzo yeBhaibheri Education
The Education uye Research Institute of Post-Diploma Education
The Institute Scientific Dzepamutemo
Last update:20 Kurume 18